Home Wararka Gudaha Baladweyne oo qarka usaaran in ay cunto la”aan ka dhacdo
Baladweyne oo qarka usaaran in ay cunto la”aan ka dhacdo
Warbixinta Xaalada maciishada Magaalada Baldweyne oo cirka gashay iyo Nolosha Bulshada Magaalada oo aad u cakiran, maxay tahay sababta maciishada kicisay?
Kiishka sonkorta ayaa suuqa ka maraya $42 dollar, Burka $38 dollar, Bariiska $34 dollar, Kartoonka baastada $10 dollar sido kale caaga sadaxlaha saliida ah ayaa maraya $9 dollar.
Bulshada Magaalada Baladweyne ayaa nolol ahaan ilaa sedex Level ay tahay waxaana ugu daran kuwa ku nool dabaqada hoose, halka kuwa dabaqada dhexe ay ayagana daremayaan maciishada qaalowday Sido kale kuwa Nolosha dabaqada sare ku jiro ay waxaas u arkin culeys.
Sababta ay maciishadu u qaalooyday ayey ganacsatada Magaalada Baladweyne ku sheegen in ay sameeyn weyn ku Leedahay xiliga Bad xiranka oo lagu jiro iyo Colaada dagalada ka socda dalalka Russia🇷🇺 iyo Ukraine🇺🇦 Sido kale waxaa ay sheegen in ay jirto cashuur said ah iyo Isbaaroyin badan.
Sido kale waxa qeyb ka ah dadka beerta dalaga Beeraha Baladweyne oo hoos u dhacay iyo dalaga ka soo baxo Beeraha oo hoos u dhacay iyo noloshii dadka oo inta badan ku tiirsan rashiinka inta badan ka yimado dalka dibadiisa.
Bulshada Magalada Baldweyne ayaa dalbanaya in hoos loo dhigo qiimaha maciishada cidkaste oo qeyb ka qaadan kartana ay kaalintooda ka qaatan sidii Nolosha Bulshada ay u noqon laheyd mid isku dheela tiran oo ay ku qancaan.
Previous articleMD Xasan Sheekh oo sheegay in DFS wadin abaabul ka dhan ah Maamulka Koonfur Galbeed
Next articleDowladda Pakistan oo codsatay in la dhex-dhexaadiyo, iyaga iyo Taalibaan
Al-Shabaab oo la wareegtay isbitaalkii CEELBUUR kadib jabkii BAXDO
Mareykanka oo gacanta ku dhigay Sarkaal katirsan Kooxda Daacish